Akwụkwọ Christopher Parsons Martech Zone |
Edemede site na Christopher Parsons kwuru
Christopher Parsons kwuru
Chris Parsons gụsịrị akwụkwọ na UCLA na nzere na Business Management. Ọ nwere oke mmasị na azụmahịa ma na-arụ ọrụ dịka onye ndụmọdụ azụmaahịa n'ime afọ iri gara aga. Na oge ya n'efu, ọ na-enyocha usoro azụmaahịa ọhụrụ ma kesaa mmemme dị mkpa site na ịde blọgụ na ịgba izu.
Tuesday, February 25, 2020 Mọnde, Febụwarị 24, 2020 Christopher Parsons kwuru
Ọnụ ego dara ada na ọkaibe nke usoro nyocha data emeela ka ndị mbido ọhụrụ na obere ụlọ ọrụ nwee ọ enjoyụ elele dị elu na nghọta bara ụba. Nchịkọta data bụ ngwá ọrụ dị ike nke nwere ikike ịkwalite arụmọrụ, melite mmekọrịta ndị ahịa ma hụ na azụmaahịa nwere ike ịchọpụta ma dozie nsogbu ndị nwere ike ịdị mfe karịa. Mụta ntakịrị ihe banyere ngwaọrụ ndị ọhụrụ na usoro nyocha na-eme ka o doo anya na ihe ọhụrụ na ihe ngwọta